Apple waxay ku heli kartaa istuudiyaha indie A24 lacag dhan 2.500 bilyan oo euro | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay sii wadaa dadaalkeeda dib u soo celinta iyo kor u qaadista Apple TV +. Si tan loo sameeyo, waxay sii waddaa inay soo iibsato taxane tayo leh iyo filimo ay jilayaan xiddigo magac leh. Laakiin sidoo kale waxay u baahan tahay nuxur asal ah, had iyo jeerna ilaalinaysa tayada astaamaha lagu garto ee ka duwan kuwa kale, taasna waa inay ku hareeraysaa shirkado wanaagsan. Mid ka mid ah xubnahaas oo wanaag kuu qaban doona, ayaa ah daraasadda A24. Waxaa lagu xantaa in shirkadda Mareykanka ee fadhigeedu yahay Cupertino doonaya inuu helo adeegyadooda.
Un warbixin kaladuwan oo cusub Waxay faahfaahin ka bixineysaa in filimka madaxa banaan iyo istudiyaha telefishanka A24 uu raadinayay iibinta suurtagalka ah, Apple-na wuxuu ka mid yahay shirkadaha muujiyay xiisaha. A24 ayaa la sheegay inay leedahay qiimo iibsi oo u dhexeeya billion 2.000 billion ilaa € 2.500 billion. Labada shirkadoodba waa aqoon hore. Apple iyo A24 waxay ka wada shaqeeyeen mashaariic kala duwan oo kala duwan tan iyo aasaaskii Apple TV +, oo ay ku jiraan filimada sida Dhagaxyada iyo Wiilasha Gobolka. Xilligan la joogo, Labaduba waxay ku wada shaqeeyaan qaab heshiis dhowr sano ah markii ugu horreysay la gaarey 2018.
Warbixinta ayaa tilmaamaysa in Apple iyo A24 ay dhawaan yeesheen wadahadalo ku saabsan suurtagalnimada iibsi. Sida A24 dhawaan bilaabay sahaminta iibka suurtagalka ah, Apple ayaa ka mid ah kuwa xiiseynaya. Xaaladaha suurtagalka ah ee heshiiska waxaa ka mid ahaa ku biirista dhexdhexaadiyaal madaxbannaan ama la wareeg buuxa oo ay la gashay shirkad tiknoolaji ah.
Inkasta oo ilo wareedyo qaar ay sheegeen in wadahadalada la wareegida Apple ay waqti dheer soo daaheen, haddana dad kale oo xog ogaal ah ayaa sheegay in wadahadaladu ay aad u dhaweyd. Warbixinta ayaa sii socota waxayna faahfaahin ka bixineysaa in halka A24 ay sidoo kale heshiis la leedahay Showtime waqtigan, heshiiskii ay la gashay shirkadda Amazon dhawaan ayuu dhammaaday Tani “waxay soo jiidan kartaa shirkadaha tikniyoolajiyadda ee u raadso macaamiishaAyaa sharaxaya warbixinta.
Haddii iibsigu ugu dambeyntii dhaqan galo, Apple waxay yeelan doontaa isbahaysi hal abuur leh oo awood badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple waxay ku heli kartaa istuudiyaha indie A24 lacag dhan 2.500 bilyan oo euro
Mitirka gulukooska dhiigga ee curyaaminta aan-duuliyaha ahayn hadda waa run